Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Martinique Breaking » Martinique meghere mbara igwe ya na ụgbọ elu Air Canada
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Martinique Breaking • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Martinique meghere mbara igwe ya na ụgbọ elu Air Canada.
A ga-enye ọrụ ikuku na Fort-de-France n'ụzọ siri ike dabere na usoro ịdị ọcha, iji hụ na ọnụnọ kacha dịrị nchebe na Isle of Flowers.
A ga-arụ ụgbọ elu na-esi na Montreal kwa izu iji maliteghachi ọrụ na Martinique na ụgbọ elu B737 nwere ọkwa abụọ nke oche 169.
Nke a na-egosi ole Martinique na French West Indies niile dị anyị mkpa na Air Canada.
A ga-eji ụgbọ elu Boeing-737 ọgbara ọhụrụ rụọ ụzọ usoro a ruo ugboro ise n'izu.
Air Canada laghachiri Martinique malite na Ọktọba 30, na-esochi ọtụtụ ọnwa nkwụsị ọrụ n'ihi ọrịa na-efe efe.
A ga-arụ ụgbọ elu kwa izu kpọmkwem site na Montreal (YUL) ịmaliteghachi ọrụ na Martinique nwere ụgbọ elu Boeing 737 klaasị abụọ nke oche 169, ha niile nwere ihuenyo mmetụ nwere mmetụta nke na-enye ohere ịnweta usoro ntụrụndụ zuru oke, gụnyere ihe nkiri, akwụkwọ akụkọ, egwu na egwuregwu.
"Anyị nwere obi ụtọ ịlaghachi azụ MartiniqueAlexandre LEFEVRE kwuru, Air Canada's Senior Director network atụmatụ.
"Nke a na-egosi ole Martinique na French West Indies dum dị anyị mkpa na Air Canada, ka anyị guzobela mmekọrịta siri ike na mpaghara ihe karịrị afọ 45 ugbu a. Dị ka Martinique bụ ebe anwụ na-ewu ewu maka Quebecers, Quebec bụ ebe mara mma maka ndị Martinic na-achọ ntụrụndụ, agụmakwụkwọ dị elu, na ohere azụmahịa. A ga-eji ụgbọ elu Boeing-737 ọgbara ọhụrụ rụọ ụzọ usoro a ruo ugboro ise n'izu. Anyị na-atụ anya ịnabata gị n'ụgbọ mmiri."